अष्ट्रेलिया आउनुअघि नेपाली विद्यार्थीले थाहा पाउनैपर्ने चार कुराहरु - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १३:१४ |
मेलबर्न । अध्यनकालागि विदेशिने नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाइमा अष्ट्रेलिया अहिले पहिलो रोजाई बनिरहेको छ । अष्ट्रेलियामा मिहिनेती विद्यार्थीहरुकालागि पैसा र भविष्य दुवै राम्रो छ । नेपालीहरुले मेहनती र मिलनसार स्वभावले अष्ट्रेलियामा नेपालीहरुको राम्रो परिचय बनेको छ । त्यसैले अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आउने बिदेशी बिद्यार्थीहरुको संख्यामा नेपालीहरु तेस्रो स्थानमा छन् ।
तर अष्ट्रेलियाकाबारेमा आवश्यक कुराहरु बुझ्दै नबुझी कन्सल्टेन्सीका भरमा आउने विद्यार्थीहरुले भने विभिन्न समस्या भोग्ने गरेका छन् । त्यसैले अष्ट्रेलिया आउनुअघि केही आधारभूत कुराहरुको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र आउनुपर्दछ ।
अष्ट्रेलिया आएर कहाँ बस्ने, आफुले अध्ययन गर्दा लाग्ने कलेज वा युनिभर्सिटीको शुल्क कति लाग्छ ? बिद्यार्थी भएर आइसकेपछि यहाँ स्थायी बासिन्दा (पिआर) र नागरिकता लिइसकेका ब्यक्तिहरुको तुलनामा सीमित सरकारी सुविधाहरु मात्र पाउने भएकाले त्यो के हो र त्यसले के असर गर्छ भन्नेमा पनि आउनुअघि नै जानकारी लिन आवश्यक छ । अर्कोतिर अष्ट्रेलिया काम नगरी खान नपाइने देश हो । त्यसैले कहाँ काम पाईन्छ, कसरी काम पाईन्छ र कस्तो किसिमको काम पाईन्छ भनेर पहिल्यै बुझेर आउनुपर्छ ।
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीलाई कामको सुविधा
अष्ट्रेलिया सरकारले बिद्यार्थीहरुका लागि प्रत्येक दुईसाता (एक फोर्टनाईट) मा ४० घण्टासम्म काम गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिन्छ । यहाँको सरकारले आम्दानी गर्ने प्रत्येक व्यक्तिसँग ट्याक्स लिने गर्दछ । त्यसका लागि नम्बर उपलब्ध गराएको हुन्छ । यहाँ आइसकेपछि उक्त नियममा रहेर काम नगर्ने र नगराउनु कानुन विपरित मानिन्छ । अहिले अष्ट्रेलियामा न्युनतम तलब प्रतिघण्टा १७ डलर ७० सेन्ट छ । बिद्यार्थीले एक महिनामा कानुनी रुपमा काम गरेर कमाउने भनेको करिब १ लाख १० हजार रुपैया मात्र हो । जुन खान र बस्नका लागि मात्र पर्याप्त हुने गर्दछ ।
कलेज वा युनिभर्सिटीको शुल्क
अष्ट्रेलियाका कलेज वा युनिभर्सिटीमा सामान्यतयः ६ महिनाको एक सेमेस्टर हुन्छ । प्रति सेमेस्टर शुल्क नेपाली ७ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ । त्यसैले आफु अध्ययनका लागि आएपछि शुल्क र अन्य खर्चहरु कसरी जोहो गर्ने ? यहाँ रहेका साथी वा नेपालका परिवारले सहयोग गर्न सक्छन् कि सक्तैनन् भनेर विचार पुरयाउन आवश्यक छ ।
जीवनशैली र सामान्य नियम
अष्ट्रेलिया अत्यन्त आधुनिक र प्रतिस्पर्धी जीवनशैली भएको देश हो । एक सेकेण्ड ढिला भयो भने वा सामान्य गल्तीले पनि ठूलो समस्यामा पर्ने खतरा रहन्छ । जस्तो नेपालबाट पहिलोपटक आएको ब्यक्तिले यहाँको बाटो काट्ने नियमदेखि गाडी चलाउने नियम समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ गाडी चलाउनेले मात्र होइन गाडीमा सवार सबैले अनिवार्य रुपमा सिटबेल्ट लगाउनुपर्छ । नभए जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा यहाँ आइसकेपछि समयलाई ध्यान दिन अत्यन्तै अनिवार्य हुन्छ । ५ सेकेण्ड ढिला भयो भने बस वा ट्रेन छुट्छ र त्यसको मूल्य चर्को पनि पर्न सक्छ । यहाा कुनै सेवासुविधा लिने स्थानमा अनिवार्य लाईनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्यार्थी भएर आइसकेपछि भिषाको शर्त पूरा गरेन भने भिषा रद्द पनि हुनसक्छ । जुन बिषय अध्ययन गर्न आएको हो त्यो अध्ययन नगरि सस्तो बिषयमा अध्ययन गरÞ्यो भने वा कक्षामा अनियमित भयो भने भिषा कुनैपनि बेला रद्द हुनसक्छ ।
यहाँको जीवनशैली एकोहोरो छ । एकले अर्कोलाई वास्ता गर्ने वा चासो राख्ने यहाँ कसैलाई फुर्सदै हुँदैन । त्यसैले अनावश्यक रुपमा हल्ला गरेमा,बुढाबुढी त हौं नि भन्दै झगडा गरेमा छिमेकीले पूलिस बोलाएर समस्यामा पारिदिने सम्भावना बढी रहन्छ ।
अष्ट्रेलियामा कानूनले निषेध गरेका कुनै पनि काम गर्नेलाई ठूलो अपराधी मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई पनि यहाँ अपराध मानिन्छ भने कुनैपनि गम्भिर अपराधमा दोषी मानिएको खण्डमा भिषा रद्द गरेर फिर्ता पठाईदिने प्रावधान समेत छ । केही नेपालीहरुले नेपालबाट नक्कली लाईसेन्स ल्याएर यहाँ सवारीसाधन चलाएको भेटिन्छ । यो् ठूलो गल्ती हो । यदि गाडी चलाउने क्रममा कुनै दुर्घटना भएर यहाँको प्रहरीले नेपालमा सवारीचालक अनुमतीपत्रको इतिहास खोज्यो भने त्यसले अझ ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
Previousप्रधानमन्त्री ओली असार ५ गते चीन जाने, दुई देशबीच सहमतिमा हस्ताक्षर हुने
Nextप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण: दर्जन सहमति र सम्झौता हुने
तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार,को को भए मन्त्री ?
२ चैत्र २०७४, शुक्रबार १३:००